नेपालले युएईसँग हार्नुको पाँच कारण | Hamro Khelkud
नेपालले युएईसँग हार्नुको पाँच कारण
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली महिला क्रिकेट टोली आइसिसी वुमन्स टि२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटमा युएईसँग ४८ रनले पराजित हुँदै बाहिरिएको छ ।
सन् २०२३ मा हुने टि२० विश्वकपको लागि अर्को वर्ष हुने ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउन नेपाल एसिया क्षेत्र छनोटमा शीर्षस्थानमा रहनुपथ्र्यो । तर नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदै बाहिरियो । जितका लागि १ सय २८ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपाल १९.४ ओभरमा ७९ रनमा अल आउट भयो ।
नेपालकी ओपनर इन्दु बर्माले २० बलमा १ चौका सहित १५ रन जोड्दा सीता रानामगर ८ बलमा ३ चौका सहित सर्वाधिक १३ रनमा आउट भइन् । अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । कविता कुँवर ४, रुविना क्षेत्री बेलबासे २, सरिता मगर ८, कविता जोेशी १ र करुणा भण्डारी २ रनमा आउट भइन् । काजल श्रेष्ठ ८, अप्सरी बेगम ४ र करुणा भण्डारी २ रनमा आउट भए । युएईकी समायरा धरणीरकाले ४ ओभरमा ५ रन खर्चेर ४ विकेट लिइन् । खुशी शर्मा र चमानी सेनेविरत्नेले २–२ विकेट लिए ।
त्यसअघि आइसिसी एकेडेमी ग्राउन्ड नम्बर २ मा टस हारेर ब्याटिङ थालेको युएईले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १ सय २७ रन बनाएको थियो । युएईकी मध्यक्रमकी चमानी सेनेवित्नेले ३६ बलमा ७ चौका सहित सर्वाधिक ५२ रन बनाइन् । ओपनर थ्रीथा सतिस ४६ बलमा ३ चौका सहित ४७ रनमा आउट भइन् । काभिसा इगोडागे २७ बलमा १ चौका सहित २२ रनमा आउट भइन् ।
नेपाल ५ खेलमा ३ मा जित र २ मा हारसहित ६ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा रहेर बाहिरियो । युएई ५ खेलमा ५ मानै जितका साथ १० अंक जोड्दै शीर्षस्थानमा रहेर ग्लोबल छनोटमा पुग्यो । हङकङ ५ खेलमा ४ मा जित र १ मा हार सहित ८ अंक जोडेदै दोस्रो स्थानमा रह्यो । हङकङसँगको ६ विकेटको हारले नेपाललाई ठूलो झड्का दिएको थियो । तर युएईलाई पराजित गरेको खण्डमा अघिल्लो चरणको सम्भावना थियो । तर बलिङ र ब्याटिङ दुबैमा कमजोर प्रदर्शनका साथ हारका साथ बाहिरियो । आजको हारमा कप्तान, प्रशिक्षक, खेलाडी सबैको गल्ती बढी छ । समग्रमा नेपालले युएईसँग हार्नुको पाँच कारण यस प्रकार छन् ।
५. टि२० विशेष ब्याटरको कमी
नेपालले टि२० विशेष ब्याटरको रुपमा युएईमा डली भट्टलाई लगेको थियो । डली टोलीमा भएकी सर्वाधिक आक्रामक ब्याटर हुन् । तर डली कतारसँग दोस्रो टि२० खेलपछि टोलीमा थिइनन् । नेपालले आजको खेलमा जम्मा ५ चौका प्रहार गरेको थियो । दबाबको खेलमा एकै ओभरमा खेललाई मोड्न सक्ने खेलाडी हुनुपर्छ । तर नेपालको टोलीमा त्यस्ता खेलाडी थिएनन् ।
त्यसको फाइदा युएईका बलरले उठाए । इन्दुलाई छाड्ने हो भने अन्य सबै ब्याटरले रन भन्दा बल खेले । पाँच मध्य तीन चौका सीताको नाममा थियो । इन्दु र काजल श्रेष्ठले १–१ चौका प्रहार गरे । टि२० विशेष ब्याटर नहुँदा नेपालले युएईलाई दबाबमा राख्न सकेन ।
४. असन्तुलित ब्याटिङ क्रम
युएईविरुद्ध नेपालको ब्याटिङ लाइनअप असन्तुलित थियो । ओपनिङ इन्दु बर्मा र सीता रानामगरले गरेका थिए । आक्रामक ब्याटिङको दबाबमा विकेट गुम्ने डरपनि त्यतिनै हुन्छ । तर ओपनर सीता आउट भएपछि रुविना आउने धेरैले अपेक्षा गरिएको थियो ।
रुविना आफ्नो अनुभव र क्षमताले खेललाई मोड्न सक्थिन् । टोलीलाई आवश्यक थियो । रुविनाले जारी प्रतियोगितामा कुवेतविरुद्ध ओपनिङ गरेकी थिइन् । जुन समय नेपालले मात्र २८ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको थियो । आवश्यक समयमा रुविना ओपनिङ आइनन् । सीता आउट भएपछि कविता कुँवरलाई नेपालले पठाएको थियो ।
कविताले ११ बलमा ४ रन बनाउँदै छैटौं ओभरको तेस्रो बलमा आउट भइन् । नेपालले पावर प्लेको भरपूर फाइदा उठाउनुपर्ने थियो । तर सकेन । रुविना चौथो नम्बरमा आउँदै ८ बल खेलेर २ रन बनाइन् । त्यसको दबाब अन्य ब्याटरमा पर्न पुग्यो । ठूलो सटको धुनमा लगातार विकेट गुम्यो । आक्रामक ब्याटिङको आवश्यक हुँदा रुविनापछि कविता जोशी वा अप्सरी बेगमको आवश्यक थियो ।
तर सरिता मगर र काजल श्रेष्ठलाई ब्याटिङमा आए । सरिता १७ बलमा ८ र काजल १० बलमा ८ रनमा आउट भइन् । अप्सरी र कविता त्यसपछि मात्र ब्याटिङको लागि आएका थिए । नेपालको ब्याटिङक्रमनै असन्तुलित थियो । आवश्यक आक्रामक ब्याटरको थियो । तर टेस्ट शैलीमा खेल्दै आउट भए ।
३. कमजोर बलिङ
नेपालको हारको कारणमा कमजोर बलिङ एक कारण हो । नेपाललाई जित बाहेक अन्य विकल्प थिएन । टस जिते पनि नेपालले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन । नेपालले युएईलाई सस्तैमा रोक्दै लक्ष्य पछ्याउनु पर्ने थियो । तर युएईले उत्कृष्ट ब्याटिङका साथ बलियो योगफल तयार पार्यो । स्कोर बोर्डको राम्रो दबाब युएईले थपेको थियो ।
कविता कुँवरले ४ ओभरमा २१ रन खर्चेर २ विकेट लिए । प्रमुख बलर सबनम राईले ४ ओभरमा ३० रन खर्चेर १ विकेट लिइन् । करुणाले २ ओभरमा ११ र रुविनाले ३ ओभरमा १८ रन खर्चेकी थिइन् । सीताले ४ ओभरमा २४ रन खर्चेर १ विकेट लिइन् । संगिताले ३ ओभरमा २३ रन खर्चिन् । बलिङ कमजोर हुँदा बलियो लक्ष्य पाएको थियो । बलियो लक्ष्य पछ्याउँदा मनोबलमा पनि दबाब थियो । जुन दबाबको कारण ब्याटिङमा खराब प्रदर्शन गर्यो ।
२. ब्याकअप प्लानमा कमी
खराब प्रदर्शनको जिम्मेवारी कप्तान र प्रशिक्षकले बढी लिनुपर्छ । नेपालसँग ब्याकअप प्लान नहुनु हङकङ र युएईसँग हारको कारण हुन् । नेपालले प्रतियोगितामा विपक्षीलाई कमजोर रुपमा लिएको थियो । प्लानमा पनि खासै ध्यान दिएन । सधैं बलिङमा राम्रो सुरुवात हुन्छ भन्ने हुँदैन । कमजोर प्रदर्शन गरेको खण्डमा कसरी पूनरागमन गर्ने टोलीसँग हुनुपर्छ । तर नेपालसँग थिएन ।
युएईकी थ्रीथा सतिस र काभिसा इगोडागेले राम्रो सुरुवात दिएपछि नेपालको बलिङले पूनरागमन गर्न सकेन । पूनरागमन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण प्लानको कमी हो । जसको भरपूर्ण फाइदा उठाउँदै युएईले बलियो योगफल बनाउँदै नेपाली ब्याटरलाई स्कोर बोर्डको थप मानसिक दबाब थप्यो ।
१. खराब ब्याटिङ र गैर जिम्मेवारपन
कमजोर ब्याटिङ र गैरजिम्मेवारी पन हारको मुख्य कारण हो । १ सय २८ रनको लक्ष्य नेपालले सजिलै पूरा गर्न सक्थ्यो । नेपाललाई अर्को चरणमा पुग्न १८.५ ओभरमा पूरा पर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेपालले हरेक ओभरमा ७ रन जोडेको खण्डमा सजिलै खेल जित्न सक्थ्यो । युएईको बलिङ प्रमुख कमजोरी हो । नेपाल अघि लक्ष्य पछ्याएको तीनै टोलीले युएईविरुद्ध १ सय रन कटाएका थिए ।
नेपालले युएईको कमजोरीलाई सदुपयोग नभएर उल्टै दुरुपयोग गर्यो । खराब सट र गैर जिम्मेवारी पन हारको मुख्य कारण हो । कुनैपनि ब्याटरले क्रिजमा जिम्मेवारी र धैर्यता देखाउन सकेनन् । डट बल अत्याधिक र त्यसपछि खराब सटका साथ आउट भए । जित्नको लागि पहिला खेलाडीमा जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।